Sizomeseka uMotsepe esikhundleni seCAF - Kaizer Motaung - Impempe
Sizomeseka uMotsepe esikhundleni seCAF – Kaizer Motaung
UTlhopie Motsepe osezoba ngusihlalo weMamelodi Sundowns okuyisikhundla ebesiphethwe uyise
Ukukhethwa kukaPatrice Motsepe njengomengameli weConfederation of African Football ngoLwesihlanu olwedlule, kujatshulelwe yinqwaba yabalandeli bakanobhutshuzwayo ikakhulukazi eNingizimu Afrika.
UMotsepe uqophe umlando ngokuba ngumengameli wokuqala weCAF odabuka eNingizimu Afrika, nokuyinto esike yahlula abanye abebezama lokhu phambilini. Lokhu kubuyisa ithemba lokuthi izinqumo ezithathwa kwiCAF ngeke zisawakhalisa amazwe ase-Afrika eseNingizimu njengoba bekuke kwenzeke phambilini.
Usihlalo weKaizer Chiefs, uKaizer Motaung, akasalanga kulabo abahalalisele uMotsepe, obengumengameli weMamelodi Sundowns, ngokuthola kwakhe isikhundla esibaluleke kangaka ebholeni lase-Afrika.
“Ngiyakubongela Patrice mngani wami. Njengoba ngikuhalalisela kule mpumelelo yakho engumlando, yingoba wenze iNingizimu Afrika yaziqhenya ngokukhethwa ngo ‘elethu’ ukuthi ube ngumengameli weConfederation of African Football. IGeneral Assembly ka-44 ebibanjelwe eRabat, eMorocco, ngoLwesihlanu lukaMashi 12, 2021, iyohlale njalo ikhunjulwa emlandweni ngokukhipha umuntu waseNingizimu Afrika ukuba abe umengameli weCAF aphinde abe yiphini likamengameli weFifa, sikwethulela isigqoko,” kusho uMotaung.
“Uphakamise ibhola laseNingizimu Afrika, walenza ukuthi lihlonishwe emhlabeni wonke. Ukuphumelela kwakho kugcwalisela kwimpumelelo esibe nayo ngesikhathi sisingatha ngempumelelo iNdebe yoMhlaba ngo-2010, yize sekuphele iminyaka engaphezu kweyishumi kwenzeka lokhu. Wenze kahle kakhulu.
“Ukugcizelela enkulumeni yakho ngemuva kokuqokwa lapho uthe: ‘Ngokusebenza ngokubambisana nakanjani siyophumelela, ukwenza ibhola lase-Afrika libe phezulu emhlabeni.’ Ngifisa ukuqinisekisa ukuthi sizokweseka emizameni yokufukula ibhola lase-Afrika ukuze libe ngeliphezulu emhlabeni. Ngikufisela okuhle kodwa.
“Ngifisa ukuhalalisela wena, umndeni wakwaMotsepe, iSouth African Football Association (Safa) nebhola laseNingizimu Afrika lonkana. Ngikufisela isikhathi esihle esikhundleni sakho njengomengameli weCAF nephini likamengameli weFifa. UMdali abe nawe, ngikufisela okuhle kodwa,” kuphetha uMotaung.
Ukukhethwa kukaMotsepe kulesi sikhundla kusho ukuthi uzokwehla ekubeni umengameli weSundowns. Uveze ukuthi indodana yakhe uTlhopie Motsepe, iyona ezongena esikhundleni ebesiphethwe nguyena kumaBrazilians njengosihlalo weqembu.
Previous Previous post: UMphahlele uthi kuzophela ukuba yiminqolo kwiPetro seyingakubo
Next Next post: Useshiyile kwiCeltic uKonco, ngabe uzosebenza kwiPSL?